Ku qor Waraaqdayda Cilmi-baarista Somalia
Ma u baahan tahay caawimaad qoris xirfadeed? Ka hel warqad tayo sare leh Ka qor warqaddayda cilmi baarista ee Somalia ku qoran dhammaan heerarka tacliimeed.
Qoritaanka Waraaqdayda Cilmi Baadhista
Markaad bilaabeysid qorida waraaqahaaga cilmi baarista, oo aad ubaahantahay inaad ogaato sida loo qoro warqadeyda cilmi baarista waxaa muhiim ah inaadan horay usoconin oo aad qorto warqada adoon qof kale kuu qaban. Sidan ayaad ku xaqiijin kartaa inaadan qorin warqad aad qof kale khayaanay.
Si loo ogaado sida loo qoro warqaddayda cilmi-baarista, waa inaad weydiisaa su'aalo qaar qoraaga warqadda. Qaar ka mid ah su'aalaha aad rabto inaad weydiiso waxaa ka mid ah:
Warqadda ma lagu qori doonaa adeeg aad isticmaasho? Dadka qaarkiis waxay jecelyihiin inay qoraan sheeko iskood ah, laakiin hadaad ku dagdagtahay way adkaan kartaa inaad isku daydo oo aad kaligaa dhameystirto.
Adeeggu ma qaadan doonaa foom amar ah markaas miyay kuu diri doonaan amar? Waxaad ogaan kartaa in haddii aad dooneysid warqadda lagu qoro qaab gaar ah laga yaabo inaad sugto inta ay ka dhammaaneyso intaadan helin.
Waqtigee buu heli karaa qoraha warqaddu inuu kula yimaado oo kula hadlo? Waa inaad awoodid in warqaddaada loo diro adeegga kadibna dib loousoo celiyo waqti adiga kugu habboon. Sidoo kale waa muhiim inaad fahanto inta ay ku qaadaneyso inay ku helaan warqadda.
Ma ku faraxsan tahay warqadda ay kuu soo diraan? Haddii aadan jeclayn natiijooyinka, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad tijaabiso adeeg kale.
Maxaa dhacaya haddii warqaddu aysan ku habboonayn adiga? Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ka fiirsato weydiinta xoogaa su'aalo ah oo ku saabsan inta ay qaadaneyso adeeggu inuu kuugu soo celiyo warqadda ama aad weydiiso haddii uu jiro waqti xadidan.
Markii aad qoreysid warqadaada cilmi baarista oo aad ubaahantahay inaad ogaato sida loo qoro warqadeyda cilmi baarista, adeega ugu fiican waa midka khibrada u leh arimahan. Waa inaad hubisaa inaad heshay dib u eegis wanaagsan oo ku saabsan adeegga aad dooratay, iyo sidoo kale inaad hubiso inaad ku faraxsan tahay natiijooyinka ay soo saareen.
Waa fikrad fiican inaad hareerahaaga fiiriso ka hor intaadan go’aanka gaarin. Waxaa jira shirkado badan oo bixiya inay qoraan warqad cilmi baaris ah laakiin waa inaad fiirisaa hareerahaaga oo aad hubisaa inaad heleyso waxaad runtii ubaahantahay.
Markaad hesho warqaddaada cilmi-baarista, waa inaad hubisaa inaad dhammaantood si fiican u akhrido. Mararka qaar khaladaadku way dhacaan, khaasatan markaad warqad qoraysid waqti aad u gaaban, sidaa darteed had iyo jeer waa fikrad fiican inaad iska hubiso warqadda kahor intaadan dirin.
Waa inaad hubisaa inaad fahantay tilmaamaha ku qoran qoraalka. Haddii dhibaato kaa haysato fahamka wax, weydii qoraaga ama tifaftiraha inuu kuu sharxo tilmaamaha.
Intaadan waraaqda dib u dirin, hubso inaad iska hubisay. Hubso inaad sameyso dhammaan sixitaanka aad isleedahay waa lama huraan oo aad ku faraxsan tahay warqadda.
Waxaa jira waxyaabo badan oo aad u baahan tahay inaad sameyso si aad si sax ah ugu qorto warqaddayda cilmi-baarista. Adiga oo waqti siiya baadhitaanka iyo helitaanka adeeg aad ku kalsoon tahay oo aad ku qanacsan tahay waxaad ka heli doontaa inay si habsami leh u socoto.
Waxa ugu dambeeya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad hubisaa in warqadda lagu soo celiyey isla galka aad ku soo dirtay. Ha u dirin warqadda magacaaga ku taal ama shaabad. Haddii warqadda lagu soo celiyo qaabkan, waxaad aakhirka waayi kartaa warqadda weligaa.
Hubso inaad raacdo tilmaamaha shirkadda aad u isticmaasho qorista warqadda. Waa inay kuu sheegaan sida saxda ah ee loo qoro warqadayda cilmi baarista ayna hubiyaan inaad heshay natiijooyinka aad u baahan tahay.
Haddii aad doorato shirkadda saxda ah ee qoritaanka warqaddaada cilmi-baarista, waxaad ogaan doontaa inaad heli karto natiijooyinka ugu fiican. muddo gaaban gudaheed.